Soo-saareyaasha Mashiinka FFP3 Mashiinka Mashiinka Mashiinka iyo Alaab-qeybiyeyaasha | Tianli
Haddii ay tahay SARS ama coronavirus pneumonia, dharka ilaalinta caafimaadku waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa faafitaanka fayraska oo dhan, iyo tayada dharka kahortaga caafimaad ayaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagaya iyada oo la horumarinayo tikniyoolajiyada wax soo saarka. Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharxi doonaa dharka kahortagga caafimaadka 4-ta soo socota.
Waxqabadka Baridaha Qaabka imtixaanka, booska muunad qaadida iyo kala soocida waxqabadka carqaladeynta ee dharka ayaa lagu muujiyey Jadwalka 1. Ka fiiri shaxda hoose meelaha muhiimka ah ee ku habboon go'doominka.
1. Isticmaalka maalinlaha ah iyo nashaadyada bannaanka.
2. Gudbinta fayraska ka hortagga
3. Faafinta dhibcaha ka-hortagga dhibcaha
4. Wasakheynta anti
5. Ka hortagga wasakhda
6. Bakteeriyada ka hortagta
7. Filter PM2.5, fayras, bakteeriyada, jeermiga, iyo waxyaabaha waxyeellada leh ee hawada ku jira, ilaali caafimaadkaaga!
1. Codsi: u adeegsiga dhismaha, macdan qodista, dhar-xidhashada, dawaynta shiidi.
2. Codsiyada: nolol maalmeedka, warshad warshad, SPA-yada, isbitaalada, rugaha caafimaad, iskuulka, meelaha shaqada, iwm
3. Kahortag raadinta gaaska dabiiciga ah iyo urka
4. Ilaalinta walxaha ka soo baxa inta lagu gudajiro hawinta, nadiifinta, goynta iyo bacda, ama warshadeynta birta, dhuxusha, macdanta birta, bur, bir, alwaax, manka iyo walxaha kale qaarkood. Dareeraha dareeraha ah ama aan saliida lahayn ee ay soosaarto buufiska aan soo saarin saliidaha hawada ka baxa ama uumi baxa. Sida kabka, shaybaarka, beeraha, kiimikada, aasaaska, nadaafadda, iwm.
Hordhac asaasi ah ee dharka ilaalinta caafimaadka
Waa maxay dharka ka hortagga caafimaad? Qeexidda iyo adeegsiga dharka ilaalinta caafimaadka.
Waa maxay qaab-dhismeedka iyo qaybaha caadiga ah ee dharka ilaalinta caafimaadka.
Hore: Maskaxda N95 Gas
Xiga: Polishing Granite iyo Marble Pad Diamond Fickert Abrasive Tools
Maaskaro aamin ah
Wax soo saar qaybaha
Maaskaro FF3 ah
Maskaxda N95 Gas